सरकारको निर्णय दमकका बिद्यालयहरुले टेरेनन् ! कोभिड १९ को नयाँ भेरियण्टको जोखिमबाट बचौ र बचाऔ | Prabhavkari News
सरकारको निर्णय दमकका बिद्यालयहरुले टेरेनन् ! कोभिड १९ को नयाँ भेरियण्टको जोखिमबाट बचौ र बचाऔ
दमक / सरकारले कोरोना संक्रमणको हिसावले जोखिमयुक्त शहरको पहिचान गरेर दमकका शैक्षिक संस्थाहरु पनि बन्द गर्ने निर्णय गरे पनि यसको कार्यन्वयन नभएको पाईएको छ । मंगलवारदेखि लागु हुने गरी बैशाख मसान्तमसम्म बिद्यालयहरु बन्द गर्ने सरकारले निर्णय गरेको थियो । स्थानीय सरकारको निर्णयलाई आधार मान्नका लागि आफुहरुले बिद्यालय लगाएको कतिपय बिद्यालयका सञ्चालकहरुले बताएकाछन् ।
सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड पालना गरेर बिद्यालय सञ्चालन गर्ने बिद्यालय सञ्चालकहरुले बताएपनि अधिकाँश बिद्यालयहरुले कुनै होशियारी र सावधानी अपनाएका छैनन् । यसले गर्दा दमकमा कोरोना संक्रमणको जोखिम देखिन्छ । भौतिक दुरी कायम गरेर बिद्यार्थी राख्नेदेखि लिएर अनिवार्य माक्स लगायतका आधारभूत मापदण्ड समेत दमकका धेरै बिद्यालयहरुले पालना गरेका छैनन् । माक्स लगाएमा र बिद्यालयमा प्रवेस गर्ने समयमा ह्याण्ड सेनिटाइजर लगाउने कार्यलाई मापदण्ड पालना गरेको भन्न पक्कै नमिल्ला ।
अभिभावकहरुलाई पनि घरमा बच्चा हेर्नुभन्दा बिद्यालयमा पठाएमा ढुक्क हुने मनोबिज्ञान रहदा बिद्यालय सञ्चालकहरुले बिद्यालय सञ्चालन गरे हुन्थ्यो भन्ने लागेको र बिद्यालय सञ्चालकहरुलाई पनि अघिल्लो पटकको बन्दका कारण आर्थिक संकट परेकाले त्यसको केहि पुर्ति गर्न भएपनि बिद्यालय लाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने देखिन्छ । तर यसले जोखिम बढ्ने र भोलि भयाभह अवस्था आउछ भन्ने बुझ्न जरुरी छ ।
कोरोना भाईरस कोभिड १९ को नयाँ भेरियण्टका कारण बढ्दो जोखिमलाई ध्यान दिदैं सरकारले शहरी क्षेत्रका विद्यालय वैशाखभर भौतिक रुपमा बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोमबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भौतिक रुपमा विद्यालय बन्द गर्दै वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन गर्ने निर्णय गरे पनि यसको कार्यन्वयनको बिषय अन्योलन देखिन्छ ।
जनस्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील बिषयमा कसैले पनि हेल्चेक्राई गर्नु हुँदैन । सरकारले अध्ययन अनुसन्धान गरेर र जोखिम पहिचान गरेर नै प्रदेश १ का बिराटनगर, इटहरी, धरान, मेचीनगर, बिर्तामोड र दमकका विद्यालय तथा क्याम्पसहरु विदा गर्ने निर्णय गरेको हुनसक्छ । यसले गर्दा सरकारको निर्णय कार्यन्वयन जरुरी रहेको छ ।